Gaaffiin masjiidaa musliimota Aksuum maaf fala dhabe? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Musliimota Woqiroomaaraay Aksuumirraa km 15 fagaattee jirtu yeroo sagadarra jiran
Qorattoonni seenaa magaalaa Aksuum umuriin ishee waggoota kuma 3 olii yoo jedhan, abbootiin amantaa garuu waggaa kuma 6 ol akka ta'u dubbatu.
Amantaa Kiristaanummaa waliin hidhata jabaa akka qabdu kan himamuuf magaalaa Aksuum keessa garuu Masjiidni tokkollee hin jiru.
Gaaffiin masjiida ijaarrachuu Musliimota magaalattii yeroo dheeraaf deebii osoo hin argatiin tureera.
Obbo Aziiz Mohaammad (maqaan kan jijjiirame) umurii isaanii guutuu magaalaa Aksuum keessa jiraatan. Ijoollee 12 kan horatanis magaaluma kana keessatti.
"Magaalattii keessatti Kiristaanniifi Musliimni yeroo gaddaafi gammachuu adda baanee hin beeknu," kan jedhan, Obbo Aziiz masjiida dhabuun isaanii garuu rakkoo akka isaanitti uume himu.
"Hin salaatiinaa jedhee kan nu dhorku hin jiru, mana mana keenyatti salaatuu ni dandeenya," jedhu.
Haata'u malee, Jimaata Jimaata salaata waloon salaatamu karaa irratti aduu keessatti salaatuuf dirqamuu dubbatu.
"Obboloonni keenya Kiristaanaa, obbolaan keenya aduu keessatti salaataa jiru, bakka wayii haa kenninuuf jechuu dhabuun isaanii nu mufachiiseera," jedhu Obbo Aziiz.
Yeroo gara garaatti iyyatanis furmaata argachuu dhabuu dubbatu.
Jiraattonni magaalattii gariin ammoo waa'ee gaaffii masjiidaa kana ifatti gaafachuu ni sodaatu.
Dhimma kanarratti kan nutti dubbatan jiraataan magaalattii kan biraa Obbo Abduu Mohaammad (maqaan kan jijjiirame) yaada nuuf kennuun dura gaazexeessitoota ta'uu keenya mirkaneeffachuu qabu turan.
Sana erga mirkaneeffatanii booda ammoo namni nu hordofee akka hin jirre bitaafi mirga mil'atan.
Gaaffiin masjiidaa musliimota magaalaa Aksuum bara mootii Hayilasillaasee irraa eegalee gaafatamaa akka ture nutti himan.
Haata'u malee, "Aksuum gadaamiidha, masjiida akka ijaartan isiniif hin hayyamnu," jedhamanii akka didaman dubbatu.
Turtii keessa magalaa Aksuum bakka Maayi Aakkoo jedhamutti lafti kenameefii mukaafi dhoqqeen erga ijaaranii booda jiraattotaan jalaa akka gubate dubbatu.
'Lafa masjiidaa kennuun aangoo koo miti'
Bara mootii Hayilasillaasee, "masjiida qofa osoo hin taane mana jireenyaas hin qabnu turre," jedhu.
'Islaamni biyya hin qabu' jedhama ture booda Dargiitu lammiin Itoophiyaa hundi walqixxeedha jedhee lafa mana jireenyaa nuuf kenne jedhu.
Ta'us garuu lafa masjiidaaf ta'u mootummaa Dargii keessas ta'e kan ADWUI keessa argachuu hin dandeenye.
Akka Obbo Abduun jedhanitti bulchaa gara Aksuum dhufu hundatti 'lafa masjiidni irratti ijaaramu akka hin kennine' jedhamee keessoon itti himama.
Bulchiinsi magaalaa Aksuum 'lafa masjiidaa kennuun aangoo koo miti' nuun jennaan mallattoo namoota 3500 walitti qabnee gara mootummaa naannoo Tigiraay deemnee turre, 'deebii isinii kennina obsaa' nuun jedhan jedhu.
Hanga yoonaa garuu deebii hin argatiin jirras jedhu.
Goodayyaa suuraa Abbootii amantaa Kiristaanaa magaalaa Aksuum
"Jimaata lafa kireeffanne, masjiida jennutti wal geenyee salaatna. Sagalee guddiftuu yoo fayyadamne, maaf sagalee ol kaaftan, maaramii tuffattaniiti nuun jedhu."
"Amala duraan hin qabne fidattani," akka jedhamanis ni himu Obbo Abduun.
Lafti kan Rabbiiti malee namni kan namaaf kennuufi nama dhoowwatu ta'uu hin qabu ture kan jedhan Obbo Abduun, amantaa isaaniirra dhiibbaan guddaan jiraachuu dubbatu.
Magaalaa Aksuum keessa kan jiru waajjirri Dhimmoota Islaamummaa mana kireeffatee akka waajiraatti itti fayyadama ture.
Waggoota 12'f kiraa waajjirichaa kan kafalaafi ture bulchiinsa magaalaa Aksuum yoo ta'u Onkoloolessa bara 2010 irraa eegalee garuu kafaluufi akka dide dubbatu Obbo Abduun.
Bakki awwaalcha musliimotaa akka dalleeffamu gaafatamee akka hin dalleeffamne, bakka itti qalmaata raawwatan kennameefi bakka itti foon hiratan dhoowwatamus dubbatu.
Bara mootummaa Dargii wal-dhabdee sababa amantaan magaalattii keessatti uumameen namootni lubbuu dhabusaanii ni yaadatu.
''Aksuum bataskaana tokkoon ol baachu hindandeessu''
Ittaanaa bulchaan gadaamiiwwaniifi batasikanoota Aksuum Bokira Liiqaan Godafa Marihaa, namoonni amantaa adda addaa qaman Aksuum keessa nagaan jiraachu akka danda'an dubbatu.
Haa ta'u malee bataskaana tokkittii qofaatu jira, kanaan alatti kan biraa kan itti dabalamu yoo ta'e seenaa balleessuudha amantaa jedhu cimaa qabu. Bataskaanni tokkittiin tun garuu magaalaa namoonni amantaa garaagaraa nagaa fi wal dandeettiin keessa jiraataniidha jedhu.
''Motummaa haaraan bara dhufe hunda masjiidi nuuf haa ijaaramu' jechuun namoonni gaafatan jiru. Gaaffii kan kan kaasan ammoo abbootii dhimmaa osoo hintaane musilimota bakkee biraatii dhufaniidha.
Fakkeenyaaf erga yunivarsitiin Aksuum banamee kaasee gaaffiicha kaasuun kanneen Aksuum keessatti dhalatanii guddatan irratti dhiibbaa taasisu. Kanneen Aksuum keess jiraatan garuu waa nu jalaa hirrate hinjedhan.
Dhugaan jiru muslimni tokko yoo du'u qeesii, daaqonii fi amantoonni dhaqaniiti awwaalu, biras ta'uun ni jajjabeessu. Rakkoo masjiidaa hawaasa Musliimaa Aksuum
''Tibba cidhaattis akkasuma. Yoo ayyaanni mikaa'elaa fi maarami jirutti ni dhufu. waliin jiraataa turre. Ani tajaajilaa bataskaanaati. hiriyyaan kiyya dhugaa muslima'' jedhu.
Goodayyaa suuraa Bataskaanaa Maaramii Tsihon Aksuum
Obbo Abduu Mahaammad ammoo yaada namoota biraatu alaa dhiibbaa taasisa jedhu walii hingalan. Kana dura mana barnootaa Isilaamummaa ijaaruuf hayyamamuun lafti erga kennameefii kan ture ta'ulleen, hanga ammaatti hojiirra akka hinolle dubbatu.
Aksuum keesstti tsabala Abuna Liibaanoos fi Abuna Maxaa'i jedhaman Musilimtoonniifi kiristaanoonni waliin akka dhiqatan Bokira Liiqaan Gudafaa ni dubbatu.
Kana malees, eddoon awwalchaa muslimtootaafi kiristaanootaa walitti dhihoo akka ta'eefi sirnicharratti adda akka hinbaabe himu. ''Masijiida kan gaafatu isa Ameerikaa jiruudha. Diree Dawaafi Jimmaa taa'aniitu 'haqa Muslimtoota Askuumiif' jechuun kanneen nama kakaasan maaltu Isaan galte? Nuti kabajaan waliin jiraataa jirra jedhu ogganaan walda kiristaanaa kun.
''Aksuum keessatti eddoowwan salaataa 13 akka qaban beekamaadha, sagadaatis jiru. Masijiin hinjiru kan jedhan warra Finfinnee jiran. Mallattoo itti tolfachu yoo barbaadan ammoo Aksuum irraa KM 15 bahanii Wuqirootti ykn KM 20 fagaatanii Adiwaatti fayyadamu danda'u.''
Osoo Aksuumiitti Masijiin haa ijaaramu jedhamee hoo?
Aksuum keessatti masijiin ijaaramu dhabuun muslimtoonni ni haaru ta'a. Nuti warri Ortodoksii garuu osoo hajajni masijiidinni haa ijaaramu jedhu dhufe ni duuna.
"Maaliif yoo jedhame seenaa warri keenya barootaaf nuuf tursiisan akka baduu hin hayyamnu. maatiin keenya akka waa tokko hinhirrifneefi itti hindaballeef waadaa nu galchanii darban,'' ejjanoosaanii ibsu.
Gama biraatiin ammoo, Muslimtoonni keesso Isaaniitti qabataniiti malee yaada dhimmichi gama mirga namoomaatiin ilaalamu qaba jedhu qabu.
Bokira Liiqaan Godafaa, ''mirgi kan gaaffii garee hundaa hammatu ta'u qaba. Kan duri warri keenya hinqabaatiin attamiin amma gaafatam? Kann dur ture osoo dhowwannee amma gaaffii kaasuu danda'u ture.
Mirgasaanii hindhowwanne. Masijiidarratti mallattoon haa ta'u jechuun waan hinturreedha. Seenaa balleessudhas,''jechuu dubbatu.
Dhgaattis Aksuum ballachaa waan jirtuuf magaalaa Waqiroo Maaraayi fi Adiwaa waliin wal qaqabuun hinolu. Yeroo sana masijiidoonni ni jiraatu. Gaaffiin isaaniis yeroo sana debii argata jedhanii amanu.
Aksuum Magaalaa Kiristaanummaa?
Oggantoonni amantaa Ortodoksii tawaahido magaalaa Aksuumitti sagalee waaqaa faaruu amantichaatiin dabaalame qofti dhagahamu qaba amantaa jedhu cimaa qabu. Magaalichi lafa qulqulluudha jedhanii yaadu.
"Akkuma warri musilimaa Makkaa kabajaan qaban sana Aksuum nu Kiristaanootaaf Makkaa keenya. Aksuum keessatti sagalee biraa dhagahu hinqabaatu. Sagaleen Allaahu Wa Kibar' jedhu yoo dhagahame Aksuum gadaamii ta'unshee dhumeef jechuudha'' jedhu.
Tajaajilaa Tsiyoon Maaram kan ta'an Batira Tiguhaan Amsaalu gama isaanitiin ''Lafa taaboonni Musee jiruutti amaniiwwan biraa jiraachu hinqabaatan. Kun amantaa malee gara jabina miti. Humnaan akka ijaaramu yoo barbaadame ammoo kun waraana labsuudha,'' jechuun dhimmichi akka waan hinbarbaachifne hinfinnee akeekachisu.
Wuqiro Maaraay kan Aksuum irraa fageenya KM 15 Irratti argamtuutti musilimtoonni baayyeen masijiida tokko keessatti walitti qabamuu salaatu. Dubartoonni ammoo waan nyaatamuu fi dhugamu dhiyeessa turan.
Isaan keessa haati umuriinsaanii waggaa 50 akka darbu dubbatan tokkoos, ''magaalaa keenya keessa masiijidoota shanitu jira. Aksuum teessuma Tsiyoon Maaramiiti jedhanii waan yaadaniif durii kaasee masijiinni Ijaarame hinbeeku. Osoo nagaafi wal kanajaan masijiin Ijaaramee gaarii ture. Ta'u baatus nuti warra keenya hincaallu. Nagaa barbaanna,'' jedhaniiru.
Goodayyaa suuraa Haadhotii Musliimaa masjiida Wuqiroomaaraay keessatti
Waliigalteen akka nuuf hayyaman barbaadna
Liiqa Kaahin Takilaayimaanooti kan bataskaana Atsada Indaa Miikaa'eelaatti tajaajila, masijiinni akka Aksuum keessatti ijaaramuuf hayyamuunis ta'e dhorkuun kan mootummaa akka hintaane dubbatu.
Akka amantaa isaaniitti kun kan ta'e, "motummaan osoo masijiin akka ijaaramuuf hayyamee boromtaa saa maala ta'u akka danda'u waan hubateef malee kiristaana jaalatee musilimaa waan jibbeef miti," jechuun dhimmichi kan ummata Aksuumiin ala kan ummata Tigiraayii fi Itoophiaa ilaalatu ta'u eeru.
Jecha Makkaa keessa batasikaanni waan hinjirreefi Aksuum keessatti masijiinni hinijaaramu jedhu kan hinfudhannee Liqa kaahinichi kun ''Makkaatti bataskaanni ijaaramuus dhiisuus nurratti jijjiramni fidu hinjiru. Nuti garu hin hayyamnu'' jechuun cimsanii dubbatu.
Gaaffii masijiin Ijaarachuuf hordoftoota amantaa Isilaamaatiin ka'u Ilaalchisuun Bulchiinsa Magaalaa Aksuumiif gaafatamulleen deebii kennuuf hayyamo hinta'iin hafaniiru.
Barreessaa mummeen dhimmoota isilaamummaa Naannoo Tigraay obbo mahaammad Kaahisaayi gama hawaasa musilimaatiin masijiid akka jiraatuuf fedhiin jiraachusaa himanii, ''Kun akka ta'u kan barbaadnu erga hawaasni musilimaafi kirisitaanaa irratti waliigalan booda. Waliigaluun masijiida ijaaru kan yaadnu,'' jedhaniiru.